PEMBROKE WELSH CORGI DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Pembroke Welsh Corgi Dog fampahalalana sy sary
Baozi the Pembroke Welsh Corgi amin'ny faha-5 taonany— 'Baozi dia alika tena mahafatifaty, mankatò, matanjaka be mifandanja amin'ny ankizy.'
Ny Pembroke Welsh Corgi dia lava (amin'ny vatany raha ampitahaina amin'ny tongotra), ambany amin'ny alika ambanin'ny tany. Ny lamosiny raha ny marina dia tsy lava noho ny an'ny ankamaroan'ny alika ny tongotr'izy ireo dia fohy fotsiny raha oharina. Ny karandoha dia malalaka sy fisaka eo anelanelan'ny sofina. Ny fijanonana dia antonony. Haavo ny topline. Mainty ny orona ary mifanena amin'ny valan'ny hety ny valanoranony. Ny maso boribory dia alokaloka volontany miankina amin'ny lokon'ny alika. Mainty ny sisin'ny maso. Ny sofina miorina dia salantsalany amin'ny habeny, manify kely amin'ny teboka boribory. Fohy dia fohy ny tongotra. Boribory lavalava ny tongotra. Matetika esorina ny lalàm-panala. Teraka tsy misy rambo indraindray ilay alika, ary voafatotra faran'izay fohy araka izay azo atao rehefa manana rambo. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny manisy rambony amin'ny ankamaroan'ny faritra any Eropa. Ny palitao roa sosona dia manana akanjo fohy fohy sy matevina ary mahatohitra toetr'andro miaraka amin'ny akanjo ivelany lava sy lava kokoa. Ny Corgis sasany dia teraka miaraka amin'ny akanjo lava kokoa antsoina hoe 'fluffy Corgi' na 'Corha lava volo.' Ireo alika ireo dia tsy manao ny fenitra voasoratra ary tsy azo aseho. Ny lokon'ny palitao dia misy mena, sable, fawn, mainty ary mainty misy marika fotsy. Matetika misy marika fotsy eo amin'ny tongotra, tratra, tendany ary ny ampahany amin'ny molotra.
Ny tsy fitoviana misy eo amin'ny Pembroke Welsh Corgi sy ny Cardigan Welsh Corgi dia ny rambon'ny Pembroke matetika bobed na voakapa rehefa teraka. Ny fanapahana rambo dia tsy ara-dalàna any amin'ny firenena maro, ary na dia any amin'ny firenena misy azy ara-dalàna aza dia maro ny olona no tsy manapaka ny rambony ary mamela azy haharitra. Na dia manana rambony lava aza ny Cardigan ary ny ekipa dia tsy ekena amin'ny fenitra an-tsoratra. Ny Pembroke mazàna dia tongotra mahitsy satria tsy lava volo toy ny Cardigan ny lohan'i Pembroke amin'ny ankapobeny dia miendrika wedge kokoa ny sofina dia kely kokoa sy akaiky kokoa noho ny Cardigan's ary ny Pembroke kosa mazàna maivana kokoa noho ny Cardigan.
Ny Pembroke Welsh Corgi dia marani-tsaina, tsy mivadika, mahay ary mahafaly ny tompony. Corgis dia mihetsiketsika izaitsizy ary tsara amin'ny ankizy raha mbola hitan'ny alika ny olona ambony noho izy eo am-pilaminana. Miaro sy matanjaka izy ireo, manao mpiambina tsara, ary alika fampisehoana sy fankatoavana tena tsara. Mitandrema amin'ny olon-tsy fantatra, tokony ho araka ny tokony ho izy ifaneraserana ary efa zatra mbola tanora. Mila ny olony hanana a tapa-kevitra, fomba fitiavana tsy tapaka , mampiseho fitarihana hentitra nefa milamina miaraka amin'ny mety serasera olombelona amin'ny canine hialana fihetsika miaro tena tafahoatra rehefa olon-dehibe. Miezaka izy ireo indraindray olona mpiandry omby amin'ny fametahana ny voditongony, na dia vitany sy tokony hampiofanina aza izy ireo tsy hanao izany. Ny Pembroke dia mazàna miondrika ary manao mpitily tsara. Raha hitanao fa mihomehy anao ny alikanao mba hifandraisana, dia mila mihodina ilay alika ianao ary mijery ny masonao fahaiza-mitarika . Ny alika iray izay mivovo aminao toy izany dia mampiseho famantarana ny olana manjaka . Mila mifampiresaka amin'ny alika ireo mpikarakara olombelona fa fihetsika tsy ilaina ny alikaola amin'ny alika hafa. Matetika tsara miaraka biby tsy kaninina . Aza avela hivoatra ny Corgi Syndrome kely alika .
Haavony: Lehilahy 10 - 12 santimetatra (25 - 30 cm) Vehivavy 10 - 12 santimetatra (25 - 30 cm)
Milanja: Lehilahy 24 - 31 pounds (10 - 14 kg) Vehivavy 24 - 28 pounds (11 - 13 kg)
Mora voan'ny PRA, glaukoma ary aretin-damosina. Mora mahazo lanja. Aza misakafo be loatra raha lasa matavy izy ireo dia mety hiteraka olana amin'ny lamosina.
Corgis dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Amin'ny fampihetseham-batana ampy dia afaka milamina ao an-trano izy ireo, saingy ho mavitrika tokoa raha tsy ampy. Hanao tsara raha tsy misy tokontany raha mbola entina mandeha an-tongotra isan'andro izy ireo.
Alika kely mavitrika voajanahary, tokony hamporisihina foana izy ireo hijanona ao. Mila entina a mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy atao amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
Ny palitao malefaka sy salantsalany ary tsy mahazaka rano dia mora tehirizina. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Araraka indroa isan-taona ny palitao.
Ny Cardigan Welsh Corgi dia antitra noho ny Pembroke Welsh Corgi, miaraka amin'ny Pembroke izay noroahina avy tao amin'ny Cardigan. Ireo karazana Corgi roa ireo dia mety ho taranaky ny Keeshond , Pomeranian , Schipperkes ary ny Vallhund soedoà . Ny sasany milaza fa i Cardigan zokiny dia avy any Cardiganshire izay nentin'ny Celts tany 1200 BC. Raha ny razamben'i Pembroke dia natolotry ny mpanenona Flemish tamin'ny Celts tamin'ny taona 1100. Na inona na inona tranga misy, ny Cardigan sy ny Pembroke Welsh Corgis dia niditra an-tsokosoko ary nihevitra ny karazany iray hatramin'ny 1934, raha ny mpitsara seho dia nihevitra fa samy hafa loatra izy ireo ary nampisaraka azy ireo ho karazany roa samy hafa. Taorian'ny nisarahan'izy ireo dia nanjary nalaza i Pembroke ary malaza mandraka androany izy noho ny Cardigan. Ny anarana 'corgi' dia miavaka amin'ny karazana karazana alika ao Cymreig (Welsh). “Alika” amin'ny Cymreig (Welsh) dia 'Ci' na raha miova moramora 'Gi', avy eo Corgi. Ny Pembroke dia eken'ny AKC herintaona talohan'ny Cardigan. Ny Cardigan dia nekena tamin'ny 1935 ary ny Pembroke tamin'ny 1934. Corgis dia nampiasaina ho mpamily omby, mpihaza vermin ary mpiambina ny toeram-piompiana. Nandroaka omby izy ireo tamin'ny alàlan'ny fihorakorahana sy ny fikikisana ny ombelahin-tongotr'omby fa tsy fiompiana fotsiny. Ny halavan'ny alika dia nanampy azy hiala tamin'ny fomba fandefasana omby.
Collins the Corgi pup
Nemo the Pembroke Welsh Corgi amin'ny 1 taona
shih tzu terrier afangaro mainty
Ity dia Chip, alika kely Pembroke Welsh Corgi alika kely.
'Abby no Pembroke Welsh Corgi izay aseho eto rehefa feno herintaona. Tena mamy sy malefaka izy, ary tsara miaraka amin'ny zafikely. Tiany ny mikapoka ny vodin-tongotr'izy ireo ary manandrana mitazona azy ireo hiaraka amin'ny faritry ny tokontany. Cowboy Giz no anaran-drainy ary Katy Get Ur Gun no reniny. '
Aseho tamim-pireharehana eto i Clarabel izay nahazo ny amboarany voalohany tamin'ny vao 9 volana.
Clarabel the Pembroke Welsh Corgi amin'ny fampahatsiahivana
Clarabel the Pembroke Welsh Corgi dia nibata ny amboaram-piangonana voalohany tamin'ny 9 volana monja
Nody nody i Clarabel the Pembroke Welsh Corgi taorian'ny andro nahombiazana
Niala alina i Clarabel the Pembroke Welsh Corgi
Hijery ohatra hafa momba ny Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi Sary 1
Pembroke Welsh Corgi Sary 2
Corgi Dogs: sary an-tsokosoko voaangona
fangaro mahazatra poodle sy volamena retriever
fifangaroan'ombilahy omby buldog
ohatrinona ny lehibe azon'ny spaniel akoho